Ukupeyinta abavelisi beemulsion | KwiChina Ukupeyinta i-Emulsion abaXhasi kunye neFektri
Ipeyinti yentsimbi yasemanzini e-Emulsion Le "I-Waterborne Metallic Paint Emulsion" yenzelwe ngokukodwa i-Waterborne Metallic Paint, enokusetyenziswa njenge fomula ye-metallic primer kunye nokugqiba ipeyinti nokusombulula imiba yokusingqongileyo ye-solvent ngokupheleleyo. Iimpawu eziphambili kunye nezibonelelo ze-1.Excellent gloss retention uphawu, Ukuxhathisa umhlwa, ukumelana nokunyibilikiswa, ukunyamezela umbala, ukunciphisa amaxesha okuphinda. Adhesion 2.Wonderful, bhetyebhetye kwaye yobulukhuni eliphezulu, nto leyo pro ...
I-Emulsion yeglasi yepeyinti yasemanzini Le "Emulsion yeglasi yepeyinti yasemanzini" yenzelwe ngokukodwa ipeyinti yeglasi yasemanzini, ene-adhesion ebalaseleyo, ukumelana kwamanzi okumangalisayo kunye nokumelana notywala kwezixhobo zeglasi. Iimpawu eziphambili kunye nezinto eziluncedo 1.Umelana nokumelana, ukumelana nesinyibilikisi, ukunyamezelana kombala, ukunciphisa amaxesha okuphinda. Adhesion 2.Wonderful, bhetyebhetye kwaye yobulukhuni eliphezulu, ebonelela ngokhuseleko emangalisayo izinto umphezulu iglasi. Inkangeleko eguqukayo ...
IComputer yeNdawo eManzi yentsimbi yokupeyinta iEmulsion Le "Icandelo elinye lamanzi elinyibilikiswe ngepeyinti Emulsion" yenzelwe ngokukodwa ipeyinti yentsimbi ehamba ngamanzi, inokusetyenziswa njengepeyinti yokuqala kunye nokugqiba ipeyinti yokuthintela ukhuseleko kwimizi-mveliso. Iimpawu eziphambili kunye neenzuzo ze-1.Ukugcina ukuqaqamba kwesigcini, ukumelana nokubola, ukumelana nesinyibilikisi, ukunyamezela kombala, ukunciphisa amaxesha okuphinda. Ukubambelela okumangalisayo, ubhetyebhetye kunye nokuqaqamba okuphezulu kuzo zonke iintlobo zentsimbi ...
IComputer yeLacquer Emulsion yeCandelo elinye Le "Icandelo elinye lamanzi eliThuthwa yiLacquer Emulsion" ilungiselelwe ngokukodwa ipeyinti ye-lacquer yokhuni lwamanzi, enobukhazikhazi obuphezulu, ukungafihli okuphezulu, ubunzima obukhulu kunye nokumelana namanzi. Iimpawu eziphambili kunye neenzuzo ze-1.Ukugcina ukuqaqamba kwesigcini, ukumelana nokubola, ukumelana nesinyibilikisi, ukunyamezela kombala, ukunciphisa amaxesha okuphinda. Ukubambelela okumangalisayo, ubhetyebhetye kunye nokuqaqamba okuphezulu, okubonelela ngokhuseleko olukhulu ...
Amacandelo amabini aManzi aManzi aLacquer Emulsion Le emulsion yenziwa ngokusetyenziswa kweemoners ezininzi ze-acrylate ngobuchwephesha bamuva bokumodareyitha. Ingasetyenziselwa ukudibanisa iinkuni ipeyinti ezomileyo kunye neqondo lokushisa eliphantsi. Iimpawu eziphambili kunye neenzuzo ze-1.Ukucaca okubalaseleyo kunye nokugcinwa kwe-gloss, ukumelana nokubola, ukumelana nesinyibilikisi, ukunyamezela kombala, ukunciphisa amaxesha okuphinda. Ukubambelela okumangalisayo, ubhetyebhetye kunye nokuqaqamba okuphezulu, okunika okuhle ...
Iiplastiki ezimbini zamanzi eziPlastiki kunye neRubber Paint Emulsion Le “Izahlulo ezibini ezihamba ngamanzi kunye neRubber Paint emulsion” yenzelwe ngokukodwa ipeyinti yeplastiki kunye neerabha ehambisa amanzi ngobumenyemenye obuphezulu, ukucaca okuphezulu, ubunzima obukhulu kunye nokumelana namanzi, ukumelana nemozulu kunye nokunamathela. ukutyabeka umphezulu weABS, iPC okanye enye ipholiyesta. Iimpawu eziphambili kunye neenzuzo ze-1.Excellent gloss retention uphawu, ukumelana nokubola, ukumelana nesinyibilikisi, ikhol ...